धेरै खाना प्रणाली फोरम विशेषज्ञहरूले चीनको कृषि खाद्य उद्योगको आधुनिकीकरणले लगानी र सिकाउने अवसर ल्याएको छ - Pandaily
धेरै खाना प्रणाली फोरम विशेषज्ञहरूले चीनको कृषि खाद्य उद्योगको आधुनिकीकरणले लगानी र सिकाउने अवसर ल्याएको छ
धेरै खाना प्रणाली फोरम विशेषज्ञहरूले चीनको कृषि र खाद्य उद्योगको आधुनिकीकरण प्रयासले लगानी र सहयोगको लागि ठूलो अवसर प्रदान गर्न प्रयास गरे।
प्रोफेसर जिया जियांगपिंग, चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सले भने, “2010 देखि 2018 सम्म चीनको उद्यम पूंजी कारोबारको 3% भन्दा कम कृषि खाद्य उद्योगमा भयो। उनले संकेत गरे कि अधिक लेनदेन कृषि, खाद्य प्रविधि र सेवा को क्षेत्र मा भयो, जो मुख्य रूप देखि मार्केटिंग अनुप्रयोगों मा शुरुआती निवेश संग तुलना मा थियो।
उनले भने कि मिश्रित वित्तको प्रयोग एक परियोजना हो जुन व्यावसायिक पूंजी को लागी सतत विकास मा मदद गर्न को लागी प्रयोग गरिन्छ. एकै समयमा, निवेशकों को वित्तीय रिटर्न प्रदान गर्न को लागी एक वैश्विक प्रवृत्ति हो र चीन मा प्रचार गर्न सकिन्छ। उनको अनुमान अनुसार, देशले अहिलेसम्म सामाजिक वित्तपोषणको अवसर विकास गरेको छैन 93 अरब अमेरिकी डलरको 208 बिलियन।
“हामी हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्न धेरै प्रेषित नवाचारको युगमा भाग्यशाली थियौँ।” जिया “हकदार” चीनले कसरी स्थायी खाद्य प्रणालीको लागि बीउ प्रसारण गर्ने “मा एक समूह छलफलमा भन्यो। “हामीलाई रोटी पार गर्न आवश्यक छ, ’cause नवाचार अपेक्षाकृत सजिलो छ, तर नवाचार जीवित हुन गाह्रो छ, जुम महत्त्वपूर्ण छ।”
प्रोफेसर जिया जियांगपङले धेरै खाना प्रणाली फोरमलाई रिपोर्ट गर्न लडाइरहेका छन्। (स्रोत: खाद्य प्रणाली फोरम)
मई मा, चीन 13 कृषि र ग्रामीण क्षेत्रहरु मा सामाजिक निवेश को प्रोत्साहित गर्न एक मार्गदर्शन को जारी गरे, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनरुत्थान र कृषि आधुनिकीकरण को बढावा दिन को चीन को प्रयास को भाग हो। आधुनिक खेती प्रजनन, कृषि प्रसंस्करण र परिसंचरण, कृषि प्रविधि नवाचार, कृषि, कृषि प्रतिभा खेती, ग्रामीण पूर्वाधार सहितको ज्ञान सहित।
नानजिंग कृषि विश्वविद्यालयका प्रोफेसर झा जिंगले चीनको 14 औं पंचवर्षीय योजना’bout छलफल गरेका थिए, जुन 2021 देखि 2025 सम्मको केन्द्रीय सरकारको आर्थिक योजना हो। उनले एक बलियो बीउ उद्योग निर्माण र ठुलो श्रृंखला भण्डारण र यातायात सुविधाहरू बढाउन, कृषि आधुनिकीकरणको नयाँ प्राथमिकता क्षेत्रलाई जोड दिए।
प्रोफेसर झा जिंगले धेरै खाना प्रणाली फोरम रिपोर्टमा भने। (स्रोत: खाद्य प्रणाली फोरम)
चीनको कृषि आधुनिकीकरण विकासशील देशहरू र विकसित देशहरूमा निर्माण गर्ने अवसरहरू छन्। उदाहरणका लागि, विकासशील देशहरूले खाद्य सुरक्षा उद्देश्यहरू र पर्यावरणको सुरक्षाको चीनको अनुभवलाई सन्तुलन गर्न सिक्न सक्छ। झा ले भन्यो कि विकासशील देशहरु को लागि, चीन ले आफ्नो कृषि उत्पादनहरु र खाद्य बिक्री को लागि प्रौद्योगिकी मा निवेश को अवसर प्रदान गरेको छ।
चीन कृषि विश्वविद्यालयका प्रोफेसर फ्यान शेंगेन पनि समूहको एउटै सदस्य हो, उहाँले भन्नुभयो कि विश्वव्यापी खाद्य प्रणालीको नयाँ मुकुट निमोनिया महामारी अधिक कमजोर हुन्छ, किनकि लाखौं मानिसहरूले स्वस्थ पोषण भोजन खर्च गर्न सक्दैनन्। झा र फ्यान “2021 चीन र विश्वव्यापी खाद्य नीति खाद्य रिपोर्ट” को सह-लेखक हो, जसले विश्व कृषि खाद्य प्रणालीको प्रतिबिम्ब पछि सुझाव दिएको छ।
रिपोर्ट अनुसार, स्थायी, गहन र पोषण उन्मुख प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जस्तै जैविक वृद्धि प्रविधिको प्रयोग उच्च उपज, उच्च पोषण फसल किस्म र स्वच्छ कृषि उत्पादन प्रविधिको प्रयोग।
प्रोफेसर फ्यानले धेरै खाना प्रणाली फोरमलाई एक भाषण दिए। (स्रोत: खाद्य प्रणाली फोरम)
“हामीलाई जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट, आपूर्ति परिवर्तन र आर्थिक वृद्धिको संकुचनको लागि सही तूफान रोक्न एकसाथ काम गर्न आवश्यक छ।” उहाँले संसारको भोकको अवस्थालाई बुझाउँछ। “टीकाको छिटो तैनातीको साथ, चाँडो वा पछि, यो वर्षको अन्त्यमा सम्भव छ, स्थिति धेरै राम्रो हुनेछ।”
“त्यसोभए समस्या हाम्रो खाद्य प्रणाली कसरी पुनर्निर्माण गर्ने हो भने, न केवल रिकभरी? रिकभरी पर्याप्त छैन, मानव स्वास्थ्यको लागि, पृथ्वीको स्वास्थ्यको लागि, हामीलाई राम्रो पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक छ।”
चेन लेई (दायाँ) र यांग रोङ्गवेन (बायाँ) को धेरै अध्यक्ष र मुख्य कार्यकारी अधिकारीले भट्ठी च्याट मा धेरै खाना प्रणाली फोरम गरे। (स्रोत: खाद्य प्रणाली फोरम)
चेन लेई, धेरै अध्यक्ष र मुख्य कार्यकारी अधिकारीले पहिले खाना प्रणाली फोरम फर्नेस च्याटमा यो दृश्यको जवाफ दिए।
“हामीलाई गहन विचारहरू चाहिन्छ र मानिसहरूको लाभको ’boutमा सोच्नुहोस्,” उनले भने। “यदि हामी कृषि खाना प्रणालीको खेतीलाई खेटेर र त्यसपछि खपतको प्रत्येक चरणमा देख्छौं भने, हामी देख्न सक्छौं कि टेक्नोलोजीले वास्तवमा विभिन्न कठिनाइहरू र चुनौतहरूमा राम्रो कठोरता सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।
“हामी वास्तवमा सबै हितधारकहरू समावेश गर्न आवश्यक छ, जुन स्थानीय सरकार, कृषि विशेषज्ञहरू र सबै किसानहरू हुनेछ,” उनले भने।
2015 मा यसको स्थापना पछि, धेरै लडाइहरु कृषिमा केन्द्रित भएको छ, लगभग 16 मिलियन किसानहरु र 820 मिलियन भन्दा बढी प्रयोगकर्ता समूहहरु लाई जोड दिए। राष्ट्रिय उपभोक्ताहरूको बिक्री बढाउनको लागि, कृषि उत्पादनको विभिन्न च्यानलहरू मार्फत धेरै लडाइहरू, अणुको जीवनशैलीमा सुधार गर्न मद्दत पुर्याउन।
अर्को हेर्नुहोस्:824 मिलियन प्रयोगकर्ताहरूसँग लड्न, सधैंभरि मापन प्रयोग गर्न सफल भयो
जर्ज वाईओ, ली कुआन यू पब्लिक नीतिको एक विद्वान विद्वानले यसो भने: “धेरै मानिसहरू जसले चिनियाँ कृषिमा सुधार गर्न आशा गर्दछन् विकासशील देशहरूमा आशा ल्याउनेछ।” “तिनीहरूको देशको कृषि पनि अपग्रेड गर्न सकिन्छ, तिनीहरूको भाग्य बहुराष्ट्रीय कम्पनीहरू द्वारा अधिग्रहण गरिएको छैन, तर अधिक स्मार्ट, अधिक प्रविधि, रसद अधिग्रहण गर्न अझ राम्रो छ।